သိုလှောင်ခြင်း | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2020 admin ရဲ့ 0
ဒီဇင်ဘာလ 26, 2018 အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး 0
Safely အဆိုပါ Optical Drive ကိုထူးဆန်းထုတ်မည်လုပ်နည်း
သင်တစ်ဦးကို CD သို့မဟုတ် DVD ကိုသင့်ကွန်ပျူတာ၏ optical drive ကိုမှာညပ်မိရနှင့်ထုတ်ရန်မည်မဟုတ်ပါလျှင်အဘယ်သို့ပြုရပါဖို့? You can take several steps […]
ကွန်ပျူတာအတွက် Blu-ray bd DVD ကို CD ကို Disc Burn ဖို့ကိုဘယ်လို
ဒီဇင်ဘာလ 4, 2018 အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး 0
အဘယ်ကြောင့် USB ကမသုံးလို့ရပါတယ် 3.0 စက်ပစ္စည်းနှင့်မည်သို့သတ်မှတ်ထားဖို့ ??
နိုဝင်ဘာလ 6, 2018 အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး 0
ယူအက်စ်ဘီ 3.0 Windows ကိုသည် device ကိုတပ်ဆင်ခြင်း Method ကို7/ 8 / 10 ယူအက်စ်ဘီ 3.0 လည်းနိမ့်တဲ့ operating အမြန်နှုန်းကိုထောက်ပံ့: အရှိန်အလွန်မြန်သော, အပြည့်အဝမြန်နှုန်း, and low […]
သင်တစ်ဦး 4K Ultra HD TV ကိုဝယ်ယူင့်ဆိုပါက, သငျသညျအစကအပေါ်စောင့်ကြည့်ဖို့အချို့သော 4K content ကိုလိုခငျြ. ပိုများသောအကြောင်းအရာများကိုကမ်းလှမ်းနေပါသည်, including some […]
စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Software များ နည်းပညာ 64-နည်းနည်းက Windows processor ​​ကို ဥပဒေရေးရာအနက် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု HD Graphics Technology_Internet စီပီယူ Samsung က HTC က Intel က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် device ကိုမော်ဒယ် မိုဘိုင်းဖုန်း OS ကို-STORE ပရိုဆက်ဆာ Nokia က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု
device ကိုမော်ဒယ် Sony Ericsson က Software များ Intel က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု HTC က processor ​​ကို ဥပဒေရေးရာအနက် ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် 64-နည်းနည်းက Windows မိုဘိုင်းဖုန်း ပရိုဆက်ဆာ စီပီယူ Samsung ရဲ့ Galaxy OS ကို-STORE ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Technology_Internet Samsung က စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Qualcomm မှ Nokia က Intel က Server ကို နည်းပညာ HD Graphics စမတ်ဖုန်းများ